देशमा अझै अप्रत्यासित् घटना घट्न सक्ने : ज्यो. दीपक सुवेदी
काठमाडौं, २२ पुस । बेला बेलामा विशेष महत्वपूर्ण खालका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भविष्यवाणी गर्ने गरेका तर केही समय यता मौन रहेका चर्चित ज्योतिषी दीपक सुवेदी (दीपक गुरु) ले फेरि एक पटक मुख खोल्दै देशमा अझै अप्रत्यासित घटना घट्न सक्ने बताएका छन् । अन्तर्वार्तामा ज्यो. दीपक सुवेदीले राष्ट्रको बारेमा केही विशेष खालको संकेत गरेका छन् ।
ज्योतिष विज्ञानको आधारमा गर्ने उनका भविष्यवाणी तार्किक हुने गर्छन् । ज्योतिष तथा फलादेशको नाममा समाजमा हुने हल्लाबाजीहरूसँग उनको भविष्यवाणीलाई दाज्न मिल्दैन । उनले शास्त्रीय मत तथा ग्रहको वैज्ञानिक ढङ्गबाट विश्लेषण गरेर मात्रै फलादेश गर्ने गर्छन् ।
जसले गर्दा उनको भविष्यवाणी प्राय सबै मिल्ने गरेको पनि छ । सोही कारणले उनी समय समयमा चर्चाको शिखरमा आउने गर्छन् । उनीले गरेको भविष्यवाणी एवं भनाईप्रति राजनीतिक क्षेत्रलगायतले ध्यान दिन थालेको महसूस् पनि गरिन्छ । सुवेदीको ज्योतिष शास्त्रको विश्लेषण सहितको भविष्यवाणीप्रति सम्बन्धित पक्षहरूले विशेष सावधानी अप्नाउने गरेको पाइन्छ ।
तात्कालीन राजनीतिक क्षेत्रबाट कुनै पनि निकास निस्कदैन भन्ने ज्यो. दीपक सुवेदीको भविष्यवाणी पहिलो संविधानसभाको अवसान र राजनीतिक क्षेत्र पाखा लागेर प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार बनेर सिद्ध भएको थियो ।
राजनीतिक कामको निकास राजनीतिक क्षेत्रबाट निस्कदैन भन्दा मान्छेहरूले उनीप्रति विभिन्न खालका टिका टिप्पणी गरेका थिए र सिधा रूपमा उनको भनाई नमिल्दो पनि लाग्थ्यो तर घटनाक्रमले उनको भनाईलाई सही प्रमाणित गर्यो । विषम परिस्थितिमा खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सरकारकारले दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराउन सक्ने कि नसक्ने अन्यौल थियो ।
जुनबेलामा सुवेदीले चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न हुने बताएका थिए । नभन्दै शान्तिपूर्ण रूपमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै संविधान जारी गर्नेबेलामा ज्यो. दीपक गुरुले धर्मलाई सम्बोधन नगरी संविधान जारी हुन नसक्ने बताएका थिए ।
नभन्दै अन्तिम आवरमा आएर छुट्टै टिप्पणीमार्फत भएपनि धर्मलाई सम्बोधन गरेरमात्रै संविधान जारी भएको थियो । यस्ता खालका भविष्यवाणीहरू गर्ने गरेका सुवेदीको स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा हुन नसक्ने भविष्यवाणी आएपछि सरकारले चुनाव तीन चरणमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्ता खालका कतिपय अनौठा त कतिपय अल्लि मान्छेको ध्यान आकर्षण हुने खालका भविष्यवाणी उनले गर्दै आएका हुन् । संविधान जारी भएको मुहूर्त राम्रो नपरेकोले कार्यान्वयन हुन कठिन रहेको र कथंकदाचित् जवर्जस्ति कार्यान्वयन गरिए पनि त्यसले विभिन्न खालका दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने उनको भनाई छ । बीचमा केही समय मौन रहेका ज्यो. दीपकले फेरि त्यस्तो संकेत गरेका छन् ।
अन्तर्वार्तामा उनले देशमा अप्रत्यासित घटना घट्नसक्ने बताएका छन् । ज्योतिषीय दृष्टिले यो राष्ट्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो एनालाइसिस्मा अधिकांश राजनीतिक तथा राज्यसँग सम्बन्धित भएका कामको मुहूर्त र ग्रह प्रतिकूल परेकोले धेरै कुराहरू नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको हितको पक्षमा नदेखिएको बताएका छन् । जसलाई नसुधारेसम्म नेपालको भविष्य अल्लि अनिश्चित रहेको उनको भनाई छ ।
कुरो अल्लि भयपूर्ण गर्नु भयो, के अझै पनि नेपालको भविष्य नराम्रो नै छ त ? भन्ने अर्को प्रश्नमा ज्यो. सुवेदीले ‘ज्योतिषीले यसरी भविष्यवाणी ढङ्गको अभिव्यक्ति दिँदा धेरै पक्षलाई विचार पुर्याएर दिनुपर्छ । धेरै क्रियाप्रतिक्रिया आउँछन् । र, पनि अन्तर्वार्तामार्फत लामो रूपमा हैन कि छोटोमा यत्ति भन्छु कि नेपालमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम राम्रो ग्रह र समयमा भएको छैन । अल्लि नराम्रो नै देखिएको छ’ भनेका छन् ।
सोही प्रश्नको उत्तरको क्रममा सुवेदीले अगाडि भनेका छन्– अँ हेर्नु फेरि यसो भन्दै गर्दा नेपाली नागरिक डराइहाल्न भने पर्दैन तर मदहोस हुनपनि हुँदैन । अप्रत्यासित परिणाम अथवा अवस्था सृजना हुँदैछ यत्ति जान्नुस् । मलाई एउटा कुराको असाध्यै याद आउँछ त्यो के भने जब शान्तिसम्झौता भयो, अनि पहिलो संविधानसभाको पनि चुनाव भयो । यो दुबै कार्यको मुहूर्त राम्रो थिएन ।
म त्यतिबेला दक्षिण एशियाली ज्योतिष महासंघको संगठन सचिव थिएँ । ज्योतिष वृतमा पनि ग्रह राम्रो परेन यसको नतिजा राम्रो हुन्न । मैले ज्योतिषक्षेत्रले मुख खोल्नु पर्यो भने । ग्रहस्थिति अनुकूल नभएपछि फल पनि नराम्रो नै हुने भयो त्यसको बारेमा ज्योतिषीहरू बोल्न डराए ।
मलाई भने भित्रभित्र छट्पटी भयो । आफ्नो विवेकले देखेको कुरा नबोली रहन मनले मानेन । त्यसपछि अन्नपूर्णपोष्टमार्फत मैले तात्कालीन राजनीतिक क्षेत्रबाट कुनै पनि निस्कर्ष निस्कँदैन भने । नभन्दै तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता सुम्पिए । त्यहाँनीर पशुपतिनाथको कृपाले निकै ठूलो दुर्घटना टर्यो । राजनीतिक पक्ष पाखा लागेर गैरराजनीतिक पक्षले सत्ता सम्हालेर देशले सुरक्षित अवतरण गर्यो ।
त्यसपछिको अवस्थामा पनि संविधान घोषणालगायतका राष्ट्रिय महत्त्वका कामहरू हुँदा राम्रो मुहूर्त एवं ग्रह परेको छैन । जसले देशलाई अर्को दुर्घटनातर्फ लैजाने खतरा निकै छ । हो यहाँनीर पनि मैले त्यही पहिलाको जस्तै पशुपतिनाथले राज्यको जिम्मेवार अधिकारीलाई कुनै अक्किल दिएर नेपाललाई सुरक्षित अवतरण गराइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास चाहीँ गरेको छु ।
कुनै अप्रत्यासित स्थितिको सृजना वा घटनालाई ग्रहले संकेत स्पष्टरूपमा गरेको छ । खतरापूर्ण अवस्था चाहीँ छ, सजग हुन जरुरी छ । सुरक्षित अवतरणको लागि सबैले पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरौं । यसरी उनले अन्तर्वार्ताको क्रममा बताएका छन् ।
अल्लि अनौठो र कुनै पनि राजनीतिक पक्षको पक्ष नलिई पश्नकर्ताको सोधाई अनुसार उनले गर्ने भविष्यवाणीमा छुट्टै दम हुन्छ । उनले प्रचण्डलाई पार्टीको नाम नफाप्ने बताएका थिए जतिबेला पाटीको नाम एनेकपा माओवादी थियो । त्यसको लगत्तै एकमहिना मै प्रचण्डले पार्टीको नाम फेरेका थिए । नभन्दै पार्टीको नाम फेरेको तीन महिनामै उनी प्रधानमन्त्री पनि बनेका थिए ।
ओरालो लागेको पार्टीलाई क्रमशः एमालेसँग मिलेर देशको सर्वश्रेष्ठ पार्टी र शक्ति बन्नाउन उनी सफल पनि भएका छन् । यस्तै अप्रत्यासित घटनालाई देख्नशक्ने क्षमता तथा भविष्यवाणीको कारण उनी बेलाबेलामा चर्चाको शिखरमा पुग्ने गरेका छन् ।
उनले गर्ने भविष्यवाणीमा तात्विक अर्थ रहने जानकारहरू बताउँछन् । च्याऊजस्तै कतै माताजीहरू त कतै नयाँ ज्योतिषीहरूको चल्ने विभिन्न खालका हल्लाबाजीहरूसँग उनलाई दाज्न नमिल्ने उनीसँग ज्योतिषीय परामर्श लिन आएका कीर्तिपुरका मित्रप्रसाद दवाडी बताउँछन् ।
उहाँ अरुजस्तो फत्फत् बोल्नुहुन्न, थोरै बोल्नु हुन्छ तर विशेष बोल्नुहुन्छ, खास समस्यामा परेकाहरूलाई उहाँले दिने उपायले निकास निस्कने गर्छ दवाडीले भने । दवाडीका अनुसार ज्यो. सुवेदीले आफूकोमा हेराउन आउनेहरूको बारेमा गोपनियता राख्ने गर्छन् । कसैको पनि पक्ष नलिने र धेरै नबोल्ने तथा आफूले देखेको स्पष्ट बताउने उनको स्वभावको कारण उनीकोमा सबै पक्षका मान्छे पुग्ने गर्छन् ।
विभिन्न टेलिभिजनमा भविष्य निर्माण कार्यक्रम चलाउँदै आएका ज्यो. दीपक गुरुले यतिबेला हेल्थ टेलिभिजनमा आफ्नो कार्यक्रम चलाउँछन् । उनको भविष्यवाणीमा विशेष अर्थ लुकेको सबैको अनुमान रहेकोले उनको भनाईप्रति सम्बन्धित पक्षले ख्याल पुर्याउनु बुद्धिमानी होला ।